Jiro LED headlight
canbus nitondra fahazavana
SMD nitondra jiro
Cree nitondra fahazavana
Nanafina xénon tsy hampihilangilana
afenina fiovam-po maika
Tsy mitovy ny vokatra (avo-end vokatra, tapaky ny vokatra sy ny vola lany faran'ny-mahomby vokatra) ho an'ny tsena isan-karazany, azafady mifandraisa aminay raha liana amin'ny vokatra.
Eny, dia manana ekipa matanjaka fandrafetana. Ny vokatra sy ny fonosana dia azo atao araka ny fangatahanao, ihany koa dia afaka tamin'ny laser ny famantarana ny vokatra.
Matetika, dia manana entana ao amin'ny tahiry, fandraisana ny fotoana (tsy ao anatin'izany ny fety) matetika 2-3 andro fiasana ny DHL / UPS / TNT / EMS. Raha mba mihoatra ny 100 milentika, mila 7-10 andro mba hanomana, raha ny mba Qty dia mihoatra ny 1.000 milentika, mila 10-15 andro mba hamita ny famokarana, Qty bebe kokoa, pls jereo amin 'ny varotra ho an'ny marina
Isika fiantohana ny entana rehetra. Ny fanoloran-tena dia ny fahafaham-po amin 'ny vokatra. Raha misy olana tsara, azafady alefaso aminay ny sary na horonan-tsary, dia isika sy mandinika ny antony tsy io olana io amin'ny ho avy, koa hanaovako fanoloana vaovao ho anareo amin'ny manaraka mba.
Address: Dehuigangwang Industrial Park, Wanggang Gongye faha-3 Rd, Baiyun distrika, Guangzhou
EKLIGHT dia arak'asa mpanamboatra ny jiro LED headlight, nafeniny xénon fitaovana, nitarika fiara, mandeha antoandro fahazavana, nitondra fanamarihana toerana.